चोरीको भिडियो हुँदा हुँदै पनि चोरलाई समात्न सक्दैन प्रहरी ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
चोरीको भिडियो हुँदा हुँदै पनि चोरलाई समात्न सक्दैन प्रहरी !
प्रकाशित मिति ५ जेष्ठ २०७६, आईतवार १३:४९ लेखक Sabita Roka
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक डा. राज्य खड्काको महत्वपूर्ण सामानसहितको झोला बैशाख १४ गते बौद्धबाट चोरी भयो । गोकर्णेश्वर यातायातको २५६८ नम्बरको बसमा साँखुबाट रत्नपार्क जानेक्रममा बौद्ध क्षेत्रमा आउँदा उनको ब्याग थियो । तर हेर्दा हेर्दै एक व्यक्ति उनको झोला बोकेर भाग्छन् । उक्त दृश्य सीसी क्यामेरामा कैद हुन्छ ।
सीसीटिभी फुटेजमा चोरले उनको झोला बाकेर भित्री गल्ली–गल्ली भागेको दृश्य छ । डा. खड्काका बाबु मधुसुधन खड्काका अनुसार झोला भित्र महत्वपूर्ण कागजातसहित ल्यापटप, क्यामरा र हार्ड ड्राइभ थियो । उनका अनुसार चोरी भएकै दिन गाडी नम्बरसहित बौद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्न जाँदा प्रहरीले उजुरी लिन नमानेपछि भोलिपल्ट मात्रै उजुरी दर्ता भएको थियो ।
यसपछि सवारी चालक र सहचालकलाई बोलाएर सोधपुछ बाहेक थप केही नभएको खड्का बताउछन् । उनकी छोरीसँग दुई ओटा झोला भएपछि सहचालकले आँफै मागेर गाडीको ¥याकमा राखिदिएका थिए । खड्का फोनमा बोल्दै गर्दा एक व्यक्तिले उनको ब्याग लिएर टाप कसे । तत्कालै चोरलाई पिछा गरेपनि एकै छिन् चोर गाएब भयो ।
सीसीटिभी फुटेजमा चोरको हुलिया स्पष्ट देखिँदा पनि चोरी भएको २ सातासम्म पनि चोर पत्ता लागेको छैन । यो घटना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो । यस्तै घटनालाई मध्यनजर गर्दै चोक–चोकमा राखिएका सीसी क्यामेरामा कैद भएको चोर समेत पक्राउ नपर्नुले सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखाएको छ ।
काठमाडौं । सरकार मातहत रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकांश परिषद् गतिहीन र भद्रगोल बन्न पुगेका छन् । ती निकायले…
भक्तपुरको मुहार फेर्न व्यस्त सांसद बस्नेत
भक्तपुर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका महेश बस्नेत अहिले सो…
बालकृष्ण ढुंगेलको फेरि दिनगन्ती शुरु, डा.केसीद्वारा धर्ना
काठमाडौं । डा.गोविन्द केसीले काठमाडौंको निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै ज्यानमारा बालकृष्ण ढुंगलेको माफी रद्ध गर्न माग गरेका छन् ।
डोटी । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले ५० वर्षको उमेरसम्म अविवाहित रहेका महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने भएको छ…
भक्तपुर । मातृभाषामा शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चत गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २५ मातृ भाषामा विभिन्न कक्षाका पाठ्य सामग्री विकास…